Soil Test ဆိုသည်မှာ
2017-10-27 12:11:12 by STI MYANMAR UNIVERSITY
အဆောက်အအုံတစ်ခု ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် သင့်တော်သော Foundation ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အရေးကြီးလှပါသည်။ ထိုသို့ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း မြေကြီး အနေအထားနှင့် အဆောက်အအုံ၏ ခံနိုင်ဝန်အားတို့သည် အဓိကကျလှပါသည်။ Foundation ၏ အဓိကတာဝန်ကတော့ အဆောက်အအုံရဲ အလေးချိန် / ဝန်အားတွေကို သက်ဆိုင်ရာ မြေကြီးက ကောင်းမွန်စွာ ထမ်းထားနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပြီး မြေကြီးထဲသို့ အန္တရာယ်မရှိပဲ ဖြန့် ဆင်း ၀င်သွားနိုင်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍့အဆောက်အအုံရဲ့ဝန်တွေကို ထမ်းထားနိုင်မည့် soil bearing capacity မရှိသောအခြေအနေတွင် Building loads ကလည်း များနေပြီး bearing capacity မကောင်းတဲ့ မြေကြီးမျိုးလည်း ဖြစ်နေခဲ့မည်ဆိုရင် အောက်အနက်တစ်နေရာမှာ bedrock လို့ခေါ်တဲ့ အောက်ခံကျောက်အလွှာကြော ရှိနေတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ pile foundation ကို ရွေးချယ်အသုံပြုရတတ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် Foundation မရွေးချယ်ခင်တွင် Soil condition ကို သိရှိရန်လိုအပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ soil test result တွေအရသာ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Soil Test Result တွင်လည်း အနက်ထုထည် အလိုက် Bearing capacity ( မြေကြီးရဲ့ ခံနိုင်ရည်အား ) ကို သိရပါမည်။ မြေလွှာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ခံနိုင်ရည်အားရှိ မရှိ၊ အဆောက်အအုံရဲ့ ဝန်အားကို ထမ်းမထားနိုင်မယ့် ခံနိုင်ရည်အား ရှိမရှိ စသည်တို့ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လောက်အနက်ထိ တူးယူဖို့ လိုမယ် မလိုဘူးဆိုတာကို သိရှိထားရပါမည်။ သို့မှသာ တွက်ချက်ရာတွင်လည်း အထောက်အကူပြုစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တည်ဆောက်မယ့် အဆောက်အအုံအတွက် သင့်တော်သော foundation ရွေးချယ်ရာမှာ soil condition နှင့် building loads တွေကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ရသည့်အတွက် Soil Test ကို လေလာသိရှိထားခြင်းသည် Engineer တစ်ဦးအတွက် အရေးကြီးလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် Soil Laboratory တွင် အောက်ဖော်ပြပါ Soil Test ဆိုင်ရများကို လေ့လာရပါသည်။ 1. Moisture content or water content test ( Soil ရဲ့ ပါဝင်နိုင်သော ရေပမာဏ ကို သိရန် ) 2. Liquid limit & plastic limit test
( Fined grained soil (Clay, Silt) တို့ရဲ့ water contents (ရေပါဝင်နိုင်မှု) limit ကို သိရန် )
( Soil ရဲ့ particle size ( အရွယ်အစား) သိရန် )
4. Hydrometer Test
( Sieve analysis မှ Sieve no: 200(ဇကာ နံပါတ်) 200ကို pass ဖြစ်တဲ့ Pan ထဲမှ soil ရဲ့ particle sizeက အရမ်းသေး၍ hydrometer test သုံးပြီး particle size ရှာခြင်း )
5. Specific Gravity (Gs)
( Soil propertiesကို တွက်ရန်။ Foundation Design တွက်လျှင် လိုအပ်သော dry unit weight ကို တွက်ရန်။ Gs လိုအပ်ခြင်း )
6. Falling head / constant head
( soil ရဲ့ permeability ကို သိရန် (ရေကို ဖြတ်၍ စမ်းသပ်ခြင်း၊
Falling head က fine-grained soil (e.g Clay & silt )အတွက်
Constand headက coarse-grained soil(e.g sand& gravel) အတွက် )
( Soil ရဲ့ shear strength သိရန် )
8. CBR test
( မြေကြီးကို တခုခု က တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အခါ မြေကြီးက ခံနိုင်မည့် mechanical strength အတွက် )
9. Triaxial test
( soil ရဲ့ shear သိရန် )
ကျောင်းသားကျောင်းသားတွေသည် ဘွဲ့ရရှိပြီးတောက် များသောအားဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေုးကုမ္ပဏီကြီးများတွင် Field Engineer, Design Engineer စသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ပြန်ဝင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ ထိုအခါ မိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရရှိသင်ကြားခဲ့ရသည်များကို စာတွေ့လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်အသုံးချနိုင်မှသာလျှင် ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်ပါမည်။
STI Myanmar University တွင် Engineering မေဂျာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် မိမိသက်ဆိုင်ရာ အထူးပြု ဘာသာရပ်အလိုက် စာတွေ့နှင်လက်တွေ့ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန်အတွက် အတွေ့အကြုံရှိ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဆရာ ဆရာမများမှ ခေတ်မှီ Lab Facilities များအသုံးပြု၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
STI MU ( MICT Campus )
Block 10, MICT Park ,
လှိုင်တက္ကသိုလ် ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
☎️ 099 55 1234 46-9
STIMU ( MDY Campus )
No. ( B- 15/16 ) , 66th လမ်းနှင့် သဇင်လမ်းထောင့်၊
☎️ 09 78 3800062 ~ 64